Andro: 6 Janoary 2020
Fiaraha-miasa miaraka amin'ny TÜVASAŞ ho an'ny tetik'asa rafitry ny jiro hazavana ao Sakarya
Ekrem Yüce, Ben'ny tanànan'i Sakarya Metropolitan, dia niara-niasa tamin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny TÜVASAŞ ary nanome ny fiaraha-miasa amin'ireo rafi-pitaterana maivana natsangana hanorina ao Sakarya. Ben'ny tanàna Yüce no nilaza, ası Ny fisian'ny orinasa lehibe toa an'i TÜVASAŞ ao an-tanànantsika [More ...]
P & ry fferrymasters amin'izao andro izao, noho ny Pan-Eoropeana fitaovana tolotra any Torkia nanohy ny fanitarana any Asia nandritra ny roa taona, dia Nanambara ny fikasany hanokatra birao vaovao dimy. P&O Ferrymasters, ankoatra ny efa misy ao Istanbul, [More ...]
Ankara-Sivas eo anelanelan'ny 2 ora sy 30 min dia hampihena ny lalana Silk 405 Km eo anelanelan'ny tetikasa Ankara-Sivas YHT dia mitohy amin'ny hafainganam-pandeha. Ankara Sivas YHT tetikasa 300 olona 7/24 andro aman'alina [More ...]
Ny Tale Jeneraly TCDD sy ny delegasiona niaraka taminy tamin'ny lamasinina tamin'ny 09.00:21 maraina tamin'io maraina io nanomboka ny Samsun ka hatrany Sivas (Thick). Ny mpanorina ny Mpitarika Lehibe Mustafa Kemal Atatürk ny Repoblikan'i Torkia tamin'ny XNUMX Septambra, [More ...]
İmamoğlu: Ny tetikasa Kanal İstanbul dia tsy azo atao hoe 'nanao azy io aho'
Ekrem Imamoglu, Ben'ny tanàna ao amin'ny renivohitr'i Istanbul Metropolitan, dia nanao fitsidihana tany Bagcilar. Namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety momba ny fandaharam-potoana i İmamoğlu nandritra ny famotopotorany tany Bağcılar. Imamoglu, mpanao gazety, ny filoha Recep Tayyip Erdogan's [More ...]
Torkia Wagon Industry Corporation (TÜVASAŞ) eo ambanin'ny National Railway Project afaka ny handray anjara amin'ny fanadinana am-bava kandidà ho ampiasaina, fanadinana am-bava daty, fotoana ary toerana ny fanadinana fidirana ho an'ny antontan-taratasy [More ...]
Ordu Metropolitan Municipal mba hanatsarana ny fanatanjahantena ririnina sy ny ririnina any amin'ny faritanin'i Ordu dia nikarakara festival sled tamin'ny lalana 3 misaraka. Ny fetin'ny sled nokarakarain'ny Kaominin'i Metropolitan ary natao voalohany tany Ordu; [More ...]
Ben'ny tanànan'ny Muğla Metropolitan Miaraka amin'ny torolalana nomen'i Osman Gürün, dia nampiharina ny fampiharana 'Positive Discrimination in Women in Transportation'. Ao anatin'ny haavon'ilay fangatahana dia ny 22.00 amin'ny ririnina ary 06.00 amin'ny fahavaratra ny mpandeha vehivavy ao Muğla. [More ...]
Fametrahana jiro LED napetraka ao amin'ny biraon'ny fiara fitaterana anatiny ao Sakarya
Natsangana teo amin'ny fijanonan'ny fiara ho an'ny mpampiasa fiara fitateram-bahoaka ny jiro LED. Amin'izany fomba izany, ny olom-pirenena dia hiandry ny fiarany amin'ny fomba milamina sy azo antoka kokoa. Sampan-draharahan'ny Fitaterana Metropolitan Sakarya [More ...]
Nanambara ny Channel Istanbul ny filoha Erdoğan
Nanao fanambarana momba an'i Kanal İstanbul ny filoha Recep Tayyip Erdoğan tamin'ny fampielezam-peo CNN TÜRK-Kanal D. Oğ Raha tsy mahita ny fitantanam-bola isika dia hanao izany amin'ny tetibolam-pirenena, hoy i Erd Erdogan momba ny Tetikasa Kanal Istanbul. fantsona [More ...]
Ny filoha Recep Tayyip Erdoğan dia nilaza fa ny sarin'ny fiara ao an-toerana dia ny "tulip ında ao amin'ny D D ary ny Special Special" amin'ny fampielezam-peo miaraka amin'i Kanal D, CNN Türk. Tiorkia Erdogan nanontany ny fomba hanombanana ny fiara, "ny voalohany namana [More ...]
Mitondra fanapotehana ny fiara tariby Sapanca! Mbola hitohy ny mpiambina mandra-panafoanana ny tetikasa
Nitohy nandritra ny 120 andro ny fifanolanana manohitra ny tetikasan'ny mponin'i Kırkpınar Neighborhood ao amin'ny distrikan'i Sapanca ao Sakarya. Mponina manerana ny fiantsonan'ny fiara fitaterana an-tariby hatramin'ny taom-baovao [More ...]
Ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank, Afyonkarahisar Iscehisar Marble Specialized Organised Industrial Organised (OIZ) hita any amin'ireo trano indostrialy. Ny minisitra Varank, tao anatin'ny haben'ny fitsidihany ny Demmak Demireller Industry Industry and Trade Inc. [More ...]
Ny fanohanana ny YHT Duzce dia mandalo fitomboan'ny fampielezankevitra amin'ny sonia
Ny fanohanana ny fampielezankevitra "haingam-pandeha haingam-pandeha ambony amin'ny Düzce" natolotry ny Düzce City Council Women Assembly ao amin'ny toeram-pivarotana tamin'ny andro farany tamin'ny 2019 dia nitombo hatrany. Manodidina ny 4 arivo ny sonia eo amin'ny 40 andro [More ...]